चिसोमा कोरोना सङ्क्रमण थप बढ्न सक्ने ,अझ सतर्क हुन जरुरी – Himshikharnews.com
१६ कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:३६
डा. सुवेदीले कोरोनाबाट सबै उमेर समूहका मानिस उत्तिकै खतरामा छन् । त्यसमा पनि बालबालिका, वृद्धवृद्धा, मुटुरोगी, मिर्गौला, क्यान्सर, मधुमेह, श्वासप्रश्वास, दम लगायतका दीर्घरोगीलाई झनै खतरा रहेको जानकारी डा. सुवेदीले दिनुभयो ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. सुवेदीले दीर्घरोगीहरूले कोरोनासँग अत्यन्त सावधानी अपनाउन सुझाव दिँदै विशेषगरी बस चालक, पसले, विभिन्न अफिस सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूसमेत बढी जोखिममा रहेको बताउनुभयो । जाडो मौसम बढ्न सुरु भएदेखि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, डा. सुवेदीले भन्नुभयो, “सङ्क्रमित बढ्दै जाँदा अस्पतालका शøया, आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामी पनि बढ्दै जाने र अस्पताल पाउन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ ।”
उहाँले बालबालिकामा पनि टन्सिल, ब्रोनकाइटिस, स्वासप्रस्वास जस्ता समस्या देखिने भएकाले अति सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । जाडोमा शरीरमा सुक्खापन हुने र शरीरको श्वासप्रश्वास प्रणालीमा हुने कोषिकाहरू कम सक्रिय हुँदा शरीरमा लामो समयसम्म कोरोनाभाइरस रहने बताउनुभयो । अरू बेलाभन्दा शरीरको प्रतिरोध क्षमता जाडोमा कमजोर हुने र कम घाम लाग्ने भएकाले शरीरका लागि चाहिने भिटामिन ‘डी’ को पनि कमी हुने जानकारी दिनुभयो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।